Akụkọ - gịnị bụ Ọdịiche nke itinye akara na mkpuchi uzuzu igwe?
ihe bụ Ọdịiche nke agba akara na metal ájá cover?
Dị iche nke agba akara na metal okpu
Ọrụ dị iche
- n'agba mgbanaka bụ ya akara akara arụmọrụ na ndụ ọrụ nwere ihe dị mkpa dị mkpa.
- Iburu uzuzu uzuzu bu igbochi ibughari n'ime uzuzu na irighiri ihe ndi ozo na emetuta oru.
Ihe dị iche,
agba mgbaaka akara na-mere nke roba. Ihe eji ebu mkpuchi uzuzu bụ efere dị mbadamba.
Uzo uzuzu bu ulo nke ulo akwukwo, nke anakpo site na mpempe ihe di nkpirikpi, nke a na-etinye n'otu mgbanaka ma obu ihe nchapu nke na-agbakwunye na mgbanaka ozo ma obu ihe nchacha, na-ekpuchi oghere di n'ime nke na-enweghi ịkpọtụrụ mgbanaka ozo ma obu Na-asacha.
Otu bụ ihe na-enweghị ntụ, ma nke ọzọ bụ ikuku. Mgbochi ustjá bụ igbochi ájá n'ime ime igwe; kaa akara ọ bụghị naanị na ájá dị na mpụga enweghị ike ịbanye na griiz dị n'ime adịghị mfe ịpụ. Griiz nke na-adịghị ọcha n'èzí adịghị mfe ịba n'ime.
Na omume ọdịiche dị n'etiti ha abụọ adịchaghị oke. Biarin bụ n'ozuzu n'ime na n'èzí mmanụ okpu, na-egwuri a ọrụ, naanị na kpọmkwem ọnọdụ naanị mkpa. Z maka uzuzu na S maka akara (FS maka akara mgbaaka na LS maka akara roba).